UCherry Jones ujoyine iqela labadlali elithi "Iintsuku ezintlanu kwiSikhumbuzo" | Ndisuka mac
UCherry Jones ujoyine iqela labadlali elithi "Iintsuku ezintlanu kwiSikhumbuzo"
Uthotho lweApple TV + luyaqhubeka nokukhula. Ezo sele zikwibhodi yezaziso ziqhubeka nokwandisa amaxesha onyaka kwaye ezizayo ziyakwanda kubalingisi kunye nabadlali abayinxalenye yabo. Kananjalo asithethi nangomdlali weqonga / weqonga. Sithetha ngeengcali ezinkulu nezibalulekileyo eziza kunika uthotho ubukho obukhulu kunye nomgangatho ophezulu. Isiphelo sokujoyina i-Apple TV + ubuyinto entle UCherry Jones "kwiintsuku ezintlanu eSikhumbuzweni"
Ophumeleleyo kwi-Emmy kunye neTony, UCherry Jones, ujoyine iqela labadlali abaza kulandela umdlalo we-Apple TV + "Iintsuku ezintlanu eSikhumbuzweni." Uza kudlala uSusan Mulderick, umlawuli wezokonga kwiSibhedlele iSikhumbuzo kunye nosihlalo wekomiti yokulungiselela imeko engxamisekileyo, ngokweNgxelo yeHollywood. Emva kwenkanyamba uKatrina, uba ngumphathi wesiganeko esonyuliweyo esibhedlele.
UJones, waziwa ngomsebenzi wakhe Ukukhusela uYakobi, "Ukulandelelana" kunye "Nesicakakazi's Tale", ujoyina amalungu akhoyo ngoku UVera Farmiga, uCornelius Smith Jr. kunye noAdepero Oduye. UJohn Ridley kunye noCarlton Cuse bahlengahlengisa kwaye baphethe ukuvelisa uthotho. Ukongeza, zombini ziya kulathisa isiqendu. UFink, umbhali wencwadi, uya kusebenza njengomvelisi kolu thotho.
"Iintsuku ezintlanu eSikhumbuzweni" uyabalisa emva kweNkanyamba uKatrina Ukusuka kwindawo yokujonga iSibhedlele iNew Orleans Memorial. Ngokusekwe kwinoveli ephumelele amabhaso ePulitzer uSheri Fink, uthotho luyehlela kwimilinganiselo yokuziphatha kunye nokuziphatha abalinganiswa abanyanzeliswa kuyo ngexesha lobunzima.
Inyathelo nenyathelo, iApple TV + yenza kakuhle kwaye yonke imihla ibhodi ebanzi yechungechunge, amaxwebhu kunye neemovie. Kuninzi okuseleyo kodwa indlela iyapaka kwaye ngokuqinisekileyo ngomgangatho awuyi kuba.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Iimveliso ze-Apple » Apple TV » UCherry Jones ujoyine iqela labadlali elithi "Iintsuku ezintlanu kwiSikhumbuzo"